Ezi mpụga: ihe ha bụ, àgwà na ihe atụ | Green Renewables
Portillo nke German | 19/05/2022 12:00 | Gburugburu
na nti mpụga ha na-ezo aka na mmetụta bara uru dị iche iche na-ejikọtaghị ọnụ ahịa nke mmepụta ma ọ bụ ihe oriri na ọha mmadụ. Nke bụ́ eziokwu bụ na omume anyị nile n’ime obodo anyị bi, n’agbanyeghị otú ha si dị ntakịrị ma ọ bụ dị mfe n’echiche anyị, na-enwe mmetụta n’ebe ndị ọzọ mejupụtara ya nọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụdị mpụga a na-eme mgbe omume anyị na-eme dị ka ụlọ ọrụ, dị ka onye ọ bụla, ma ọ bụ dị ka ezinụlọ nwere mmetụta dị mma na nke bara uru na ihe ọ bụla ọzọ.
N'isiokwu a, anyị ga-elekwasị anya n'ịkọwa ihe mpụga dị mma gụnyere, àgwà ha na uru ha bara.
1 Kedu ihe ha bụ
1.1 nti mpụga
1.2 mpụga mpụga
2 Kedu ka esi ejikwa mpụga na-adịghị mma ma kwalite ndị dị mma?
3 Oriri externalities
Kedu ihe ha bụ
nti mpụga bụ mmetụta dị mma nke ọrụ ndị otu obodo, ọ bụghị n'ezoghị ọnụ na ụgwọ ma ọ bụ uru nke mmemme ndị ahụ. Nkọwa nke mpụga dị mma ejedebeghị na ngalaba ma ọ bụ sayensị ọ bụla, ọ gụnyere mmetụta ndị ahụ niile dị mma, nnukwu na obere, nke omume nke onye ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike inwe na ọha anyị.
Anyị na-ekwu maka mpụ dị mma nke na-adịghị etinye na ọnụahịa mmepụta ma ọ bụ ọnụ ahịa ịzụta, mana nke ahụ nwere ike nweta ezigbo uru maka ọha mmadụ n'ozuzu ya. Ntinye ego nke ụlọ ọgwụ na ụlọ nyocha iji chọta ọgwụgwọ maka ọrịa ụfọdụ bụ ihe atụ nke a. Na mbụ, ị nwere ike iche na nkwa a na R&D nwere ike na-efu nnukwu ego ma ọ bụrụ na ndị nyocha enweghị ike ịchọta ọgwụgwọ ngwa ngwa.
Eziokwu na-agwa anyị nnọọ ihe dị iche, na ụdị ọrụ a dị ezigbo mkpa maka ọdịmma na ahụike nke ndị mmadụ, ebe ọ bụ na n'oge na-adịghị anya, a ga-achọpụta ọgwụ na-ebelata mmetụta nke ọrịa ahụ. Ọgwụ a, nke na-ewe oge iji nweta, jikọtara ya na nnukwu ego akụ na ụba. ga-enwe ezigbo mpụga mpụga maka ọha mmadụ site n'ịzọpụta ọtụtụ puku ndụ, ma nke a adịghị egosi na ọnụ ahịa nke ịme nyocha dị ogologo na nke ka elu.
N'otu aka ahụ, e nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịmepụta ihe dị mma maka ọha mmadụ, nke n'aka nke ya dị mkpa maka ịrụ ọrụ ya nke ọma:
Tinye ego n'ichekwa ngwa ahịa ọha (okporo ụzọ, ụlọ, ogige ntụrụndụ, ámá egwuregwu, ụlọ ọgwụ).
mmụta (ịkwado ụlọ akwụkwọ, ndị nkuzi ruru eru, usoro ọmụmụ zuru oke).
Nnyocha ahụike (ọgwụ mgbochi, ọgwụ, ọgwụgwọ ọhụrụ).
N'adịghị ka mpụta dị mma, mpụga na-adịghị mma bụ nsonaazụ nke ime ihe ọ bụla na-akpata mmerụ ahụ na ọha mmadụ, egosighi na ọnụ ahịa ya. Ọ bụ ezie na anyị na-eche echiche sitere na mpaghara akụ na ụba, echiche ndị a nwere ike ịmegharị ya na mpaghara ọ bụla nke ndụ kwa ụbọchị.
Ezigbo ihe atụ nke mpụga na-adịghị mma bụ mmetọ nke gburugburu ebe obibi, karịsịa ụlọ ọrụ, site na nnukwu ụlọ ọrụ. Cheedị banyere otu nnukwu ụlọ ọrụ na-egwuputa ihe na-ahụ maka mmepụta na nhazi nke coal. Mgbe a na-atụle ụgwọ ọrụ nke ịrụ ọrụ, ha anaghị echebara oke mmetọ nke ọ ga-eme na gburugburu ebe obibi. A na-atụle nke a mpụga na-adịghị mma ma bụrụ nsonaazụ nke usoro mmepụta nke ụlọ ọrụ ahụ na egosighi na ọnụahịa ahịa ma ọ bụ ọnụ ahịa nke ịmepụta coal.
Ọ bụrụ na anyị akwụsị ma chee echiche, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ omume niile nwere mpụga ọjọọ maka ọha mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, iji ụtaba na-enwe mmetụta na-emerụ ahụ maka ahụike onye ọrụ, ma na-emepụta mpụga na-adịghị mma dị ka mbelata nke akụrụngwa (ọ bụrụ na mmadụ na-ese anwụrụ n'ime ụlọ, mgbidi ahụ nwere ike gbanwee ma mebie ya site na anwụrụ ọkụ), na ọbụna nwee mmetụta na-adịghị mma. na ahụike mmadụ (ndị ọrịa asthmatic na-ekuru anwụrụ ọkụ).
Kedu ka esi ejikwa mpụga na-adịghị mma ma kwalite ndị dị mma?
Gọọmenti nwere usoro iji chịkwaa na ibelata ọgbọ nke mpụga adịghị mma, dịka:
Ụtụ isi na ụlọ ọrụ kacha emetọ kwalite ojiji nke ume ọhụrụ na-adigide mmepụta usoro.
Hazie ụfọdụ mmemme (dịka ọmụmaatụ, ise siga, okporo ụzọ na nnukwu obodo).
Mmemme mmụta na mmata ọha.
N'aka nke ọzọ, e nwekwara usoro na-akwalite ma na-amụba mpụta dị mma nke ụlọ ọrụ na ndị mmadụ na-emepụta:
Enyemaka na ebe agụmakwụkwọ (ụlọ akwụkwọ nọọsụ, ụlọ akwụkwọ, wdg).
Nye ego maka nyocha na mmepe, karịsịa na ngalaba sayensị na ahụike.
Mpụga, ma ọ dị mma ma ọ bụ adịghị mma, ha adị ọ bụghị nanị na ọnọdụ akụ na ụba nke ọha mmadụ. Ụdị omume ọ bụla, dị ka ịṅụ sịga ma ọ bụ ịtụba plastik n'akụkụ ụzọ, nwere ike inwe mmetụta dị mkpirikpi / ogologo oge na ọha mmadụ, nke nwere ike ịdị njọ ma ọ bụ dị mma, dabere na omume ahụ.
Ụfọdụ omume ndị ahịa nwere ike inwe mmetụta mpụga ma ọ bụ mmetụta nke abụọ nke a na-atụleghị na ọnụahịa azụmahịa. Mpụga nke oriri nwere ike ịdị mma ma ọ bụ adịghị mma. Ọnụ ego ma ọ bụ uru nke mmepụta, A ghaghị iburu n'uche iji ma ọ bụ imegharị ihe mgbe ị na-emepụta amụma akụ na ụba ndụ ndụ.
Mpụga na-ebilite mgbe ikike ihe onwunwe na iji akụrụngwa sitere n'okike na-enye naanị uru nkeonwe na-eburu n'uche mmetụta ọjọọ ma ọ bụ dị mma.
Na nkenke, gị onwe gị nwere ike inwe mmetụta ka mma ma ọ bụ njọ na-etinyeghị aka na ịzụrụ ma ọ bụ ire ngwaahịa ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, itinye aka na ọrụ akụ na ụba a dị mkpa iji meziwanye ọdịmma nke ndị ahụ metụtara.
Iji rụọ ọrụ nke ọma, ọnụ ahịa ahịa ga-adarịrị ọnụ ahịa ma ọ bụ uru ha. Mgbe ngwaahịa ọhụrụ nwere mpụta na-adịghị mma na/ma ọ bụ ihe mpụga dị mma karịa ngwaahịa ọdịnala, mana ọ dị oke ọnụ iji mepụta ya, a ga-atụ ụtụ ya nke ọma. A ga-akwụ ụgwọ mmefu ego nke obodo site n'ibelata mmefu ọha maka ya dozie mpụta ndị na-emebeghị. A ga-ere ngwaahịa ndị ahụ n'ụzọ asọmpi na-enweghị atụfu uru, a ga-agbakwa ndị na-azụ ahịa ume ịzụrụ. Ndị na-emepụta ihe na-emeri, ndị na-azụ ahịa na-emeri, na gburugburu ebe obibi na-emeri.
N'ihi nke a, anyị ga-atụle ihe mpụga gburugburu ebe obibi ma nyochaa mmetụta kpọmkwem na nke na-apụtaghị ìhè nke mmepụta na gburugburu ebe obibi. A ghaghị iburu uru a n'uche mgbe ị na-atụnyere ngwaahịa, karịsịa ma ọ bụrụ na ịzụrụ bụ maka mpaghara ọha. Ngwaahịa dị ọnụ ala abụghị mgbe niile dị ọnụ ala.
Dịka ọmụmaatụ, mba ndị na-ebupụ carbon dioxide ọzọ ga-akwụrịrị ụtụ isi. Ọ bụ ya mere gọọmentị ga-eji taa ụlọ ọrụ na-emetọ ihe ntaramahụhụ. Ọzọ, ụlọ ọrụ ndị a ga-enyefe ego ndị a na ọnụahịa ire ere. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-enweta asọmpi. Emebere amụma mkpali ndị a iji belata mpụga adịghị mma.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị nwere ike ịmụtakwu banyere mpụ dị mma na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » nti mpụga
Ụdị pine na Spain